ရှမ်းပြည်နယ်မှဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ဝင်များ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ပြည်နယ်အသီးသီးမှ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖွဲဝင်များ သည် ကိုယ်နေတဲ့နေရာမှာဘာတွေဗုဒ္ဓဘာသာ
နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှု= Jan 31 Like 12 members like this
တောင်ကြီးမြို့ မိုးကုတ်ရိပ်သာ ဓမ္မာရုံ အတွင်းရှိ မြတ်စွာဘုရား ရုပ်ပွားတော်
ရှမ်းပြည်နယ်မှဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ဝင်များ သို့အဖွဲ့ဝင်ပြီးမှ မှတ်ချက်များကိုရေးသားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
yankyaw သည် October 23, 2012 က 9:44pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ကျတော် ညောင်ေ၇ွှကပါခင်ဗျာ..အဖွဲ့ဝင်အားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေ aye aye myaing သည် October 20, 2012 က 10:01pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အားလုံးဘဲ မင်္ဂလာပါရှင် အကုသိုလ် များချုပ် ငြိမ်းပြီး ကုသိုလ်များ ပွါးများနိုင်ကြပါစေ uoaktama သည် September 26, 2012 က 10:21amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အေးသာယာမှာနေပါတယ်။ uoaktama သည် September 17, 2012 က 10:19amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး ကုသိုလ်တရားများစွာပွားနိုင်ကြပါစေ အရှင်အာစိဏ္ဏ သည် August 19, 2012 က 12:38amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အားလုံးကို ခင်ပါတယ် kham သည် August 7, 2012 က 7:12pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင့်. လားရှိုးဇာတိကပါ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရတာဝမ်းသာမိပါတယ်. Peaceangel သည် March 28, 2012 က 8:32pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင့် ညီမက ပင်းတယသူဖြစ်ပါတယ်ရှင့်.. ဒီဆိုဒ်ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရတာ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်ရှင့်..
အားလုံးဘဲ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းလာလို့ ခန္ဓာ့ဝန်၊ သာသနာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်.. မြတ်သွင်ကို သည် March 3, 2012 က 3:46pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ ဇာတိကတော့ တောင်ကြီးကပါ ခု မြစ်ကြီးနားနောက်နေပါတယ် မြတ်သွင်ကို သည် February 26, 2012 က 6:49pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ko zaw win သည် February 15, 2012 က 3:51pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ဇာတိကရန်ကုန်ကပါ အခုရှိနေတာက မူဆယ်မှာပါ ‹ Previous
Top News · Everything ကိုဦး liked ကောင်းမြတ်မင်း's discussion ဘာကြောင့်ဘုရားအားရှိခိုးပါသနည်း.........?46 minutes agoကိုဦး သည်profileကိုပြုပြင်သွားသည်။1 hour agodimplemit commented on dimplemit's blog post 'ပထမဇောများလားနော်'"ဘုန်းဘုန်းရှင်းပြတာတော့ ရေမြောင်းတူးတုန်းရှိသေး ရေစီးလာသလိုမျိုးတဲ့။ ကုသိုလ်အကျိုးပေးဖို့…"1 hour agodimplemit leftacomment for တိုးတိုးအောင်"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်